ကလေးများနှင့် ဆယ်ကျော်သက်များတွင် ဖြစ်ပွားသော ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် မိုင်းလွိုက် လူခီးမီးယား(Acute Myeloid Leukemia (AML)) - Together
Acute Myeloid Leukemia ဆိုတာ ဘာလဲ။
Acute myeloid leukemia (AML) ဆိုသည်မှာ သွေးနှင့်ရိုးတွင်းခြင်ဆီတွင်ဖြစ်ပွားသည့် ကင်ဆာရောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ လူခီးမီးယားရောဂါတွင် ကင်ဆာဆဲလ်များက ကျန်းမာသောသွေးဆဲလ်များထက်ပိုပွားပြီး ယင်းက အဖျားတက်ခြင်း၊ ပင်ပန်းနွမ်းလျခြင်း၊ အလွယ်တကူ အညိုအမည်းစွဲခြင်း၊ သွေးယိုစီးခြင်း၊ ရောဂါပိုးဝင်ခြင်းနှင့် အခြားပြဿနာများကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။ ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် လူခီးမီးယားရောဂါဆိုသည်မှာ ရောဂါသွင်ပြင်လက္ခဏာများက အချိန်တိုအတွင်း ဆိုးရွားလာခြင်းကိုဆိုလိုပါသည်။ ကလေးများမှာ အလျင်အမြန် နာမကျန်းဖြစ်ပြီး ဆေးဖက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု ချက်ချင်းလိုအပ်လာနိုင်ပါသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ကလေး 500 ခန့်တွင် AML ကို နှစ်စဉ် တွေ့ရှိရပါသည်။ (ယင်းက အရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင် ပိုမိုပြီး ဖြစ်တတ်ပါသည်။)
AML သည် ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှ လင်ဖိုဆိုက်အမည်ရှိ သွေးဖြူဉဆဲလ်တစ်မျိုး လွန်ကဲစွာ ထုတ်လုပ်သော လင်ဖိုဘလပ်စတစ် လူခီးမီးယား (acute lymphoblastic leukemia) (ALL) ပြီးလျှင် ဒုတိယအဖြစ်အများဆုံး ကလေးဘဝတွင်ဖြစ်သည့် လူခီးမီးယားရောဂါဖြစ်ပါသည်။
ကလေးဘဝတွင်ဖြစ်ပွားသည့် AML သည် ပထမ အသက် ၂ နှစ်အတွင်းနှင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်များတွင် အဖြစ်အများဆုံးဖြစ်သည်။
AML ရှိသောကလေးများကိုကြည့်ရာတွင် ယောက်ျားလေးနှင့် မိန်းကလေးအကြားနှင့် ဥရောပနှင့် အာဖရိကမျိုးရိုးမှဆင်းသက်လာသူများအကြား ဖြစ်သည့်အရေအတွက် အတူတူဖြစ်ပါသည်။
ယခု ပုံရိပ်က အနုကြည့်မှန်ပြောင်းတစ်ခုအောက်တွင် ပုံမှန်၊ ကျန်းမာသည့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီပုံစံမျိုးပေါက်ကြောင်း ပြသပါသည်။
ဤပုံသည် acute myeloid leukemia ရှိသော ကလေးလူနာတစ်ဦး၏ ရိုးတွင်းခြင်ဆီဖြစ်ပါသည်။
AML က မိုင်းလွိုက် ပင်မဆဲလ်များ ဟု ခေါ်သော သွေးဆဲလ်များကို ထိခိုက်စေပါသည်။ သာမန်အားဖြင့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီသည် သွေးဆဲလ်များထုတ်လုပ်သည့် ပင်မဆဲလ်များကို ပြုလုပ်ပေးပြီး ယင်းတို့က မိုင်းလွိုက်ပင်မဆဲလ်များ သို့မဟုတ် လင့်ဖွိုက်ပင်မဆဲလ်များ တဖန်ပြန်ဖြစ်သွားသည်။ မိုင်းလွိုက် ပင်မဆဲလ်တစ်ခုသည် ဖွံ့ဖြိုးပြီးသွေးဆဲလ်သုံးမျိုးအနက်မှ တစ်မျိုးမျိုး ထပ်မံဖြစ်လာသည် -
AML အမျိုးအစားကွဲပေါင်း များစွာရှိပါသည်။ AML အမျိုးအစားက ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်နှင့် ကုသမှုကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။
AML အမျိုးအစားကွဲကို သိရှိခြင်းက ဆရာဝန်များအနေဖြင့် AML ကေ့စ်ဖြစ်ရပ်များအား အန္တရာယ်မြင့်သည် သို့မဟုတ် အန္တရာယ်နိမ့်သည်ဟူ၍ အုပ်စုခွဲနိုင်ပြီး အသင့်လျော်ဆုံးကုသမှုကိုရွေးချယ်ရာတွင် ကူညီပေးပါသည်။ AML အတွက်ကုသမှုမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်းကုထုံး နှင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးကုသမှုဖြစ်သည်။ အန္တရာယ်ရှိသည့်အမျိုးအစားအုပ်စု (အန္တရာယ်အပေါ်မူတည်သည့် ကုထုံး) အပေါ်အခြေခံပြီး ပေးအပ်သည့်ကုသမှုက ကင်ဆာရောဂါမှ ရှင်သန်လွတ်မြောက်နိုင်သည့်နှုန်းများကို မြင့်စေပါသည်။ အန္တရာယ်မြင့်သည့်ကင်ဆာရောဂါပုံစံရှိသော လူနာများအနေဖြင့် အပြင်းထန်ဆုံးကုထုံးကို ရရှိချိန်၌ အန္တရာယ်နိမ့်သည့်လူနာတစ်ဦးအနေဖြင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနည်းပါးသည့် ပြင်းထန်မှုနိမ့်သောကုထုံးကို ရရှိပါသည်။ AML အမျိုးအစားကွဲများဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ ပိုမိုသိရှိလိုပါက သင်၏ သမားတော်ကို မေးမြန်းပါ။
acute myeloid leukemia (AML) ၏အမျိုးအစားကွဲများ နှင့် ဆက်စပ်သောကင်ဆာအကျိတ်များကို ကလေးများတွင် တွေ့ရပါသည် (ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း၊ 2016 ခုနှစ်)-
တစ်ကျော့ပြန် မျိုးရိုးဗီဇမူမမှန်မှုများရှိသည့် AML
ခရိုမိုဆုန်း 8 နှင့် 21 တို့အကြား ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုအပြန်အလှန်ဖလှယ်နေသည့် AML
ခရိုမိုဆုန်း 16 နေရာတွင် ၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုအခြားနှင့်ဖလှယ်နေသော သို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည့် AML
PML-RARA (ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာ တိုးပွားသည့် ပရိုမိုင်အယ်လိုဆိုက်တစ် လူခီးမီးယား (acute promyelocytic leukemia) ရှိသည့် APL
ခရိုမိုဆုန်း9နှင့် 11 တို့အကြား ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုအပြန်အလှန်ဖလှယ်နေသည့် AML
ခရိုမိုဆုန်း6နှင့်9တို့အကြား ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုအပြန်အလှန်ဖလှယ်နေသော AML
ခရိုမိုဆုမ်း3နေရာတွင် ခရိုမိုဆုန်းအစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုသည်အခြားနှင့်ဖလှယ်နေသောသို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသည့် AML
ခရိုမိုဆုန်း1 နှင့် 22 တို့အကြား ၎င်းတို့၏အစိတ်အပိုင်းငယ်တစ်ခုဖလှယ်နေသော ရိုးတွင်းခြင်ဆီရှိ သွေးမွှားဆဲလ်လောင်း AML(megakaryoblastic)
သန္ဓေပြောင်းလဲနေသော NPM1 ပါသည့်AML
CEBPA ၏ မျိုးရိုး ဗီဇကွဲနှစ်မျိုးစလုံး သန္ဓေပြောင်းလဲနေသည့် AML
အခိုက်အတန့်သတ်မှတ်ချက်- သန္ဓေပြောင်းလဲနေသော RUNX1 ပါသည့် AML
မိုင်အယ်လိုဒစ်စ်ပလေးရှား (myelodisplasia) ခေါ် ရိုးတွင်းခြင်ဆီဆဲလ် ကြီးထွားမှု မမှန်ကန်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ပြောင်းလဲမှုများပါသည့် AML
ကုသမှုနှင့်ဆက်စပ်သည့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ဆဲလ်မတူသည့်ကင်ဆာ မိုင်းလွိုက် နီယိုပလာဆမ်များ (myeloid neoplasms)
AML၊ အခြားတစ်နည်းဖြင့် ခွဲခြားဖော်ပြခြင်းမရှိ
ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီရှိ မိုနိုဆိုက်သွေးဖြူဉဆဲလ်မှ ဖြစ်သော မိုင်အယ်လိုမိုနိုဆိုက်တစ် လူခီးမီးယား (Acute myelomonocytic leukemia)
ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီရှိ မိုနိုဆိုက်သွေးဖြူဉဆဲလ်လောင်းမှ ဖြစ်သော မိုနိုဘလပ်စတစ်/မိုနိုဆိုက်တစ် လူခီးမီးယား (Acute monoblastic/monocytic leukemia)
ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီရှိ သွေးနီဉဆဲလ်လောင်းမှ ဖြစ်သော အရီသရွိုက် လူခီးမီးယားအမျိုးအစားကွဲ (Pure erythroid leukemia)
ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီရှိ သွေးဉမွှားဆဲလ်လောင်းမှ ဖြစ်သော မက်ဂါကာရီယိုဘလပ်စတစ် လူခီးမီးယား (Acute megakaryoblastic leukemia)
ရိုးတွင်းခြင်ဆီရှိ တွယ်ဆက်တစ်ရှူးကင်ဆာ ခေါ် မိုင်းလွိုက် ဆာကိုမာ(Myeloid sarcoma)
ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း (မွေးရာပါကလေး ဉာဏ်ရည်မပြည့်သည့်) ရောဂါ နှင့်ဆက်နွှယ်သည့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီရှိ ဆဲလ်များလျင်မြန်စွာပွားခြင်း
ယာယီ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီမှသွေးဆဲလ်များထုတ်လုပ်သည့်ရောဂါ (TAM)
ဒေါင်းဆင်ဒရုန်း (မွေးရာပါ ကလေး ဉာဏ်ရည်မပြည့်သည့်) ရောဂါနှင့်ဆက်စပ်သော မိုင်းလွိုင် လူခီးမီးယား
ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် မိုင်းလွိုက် လူခီးမီးယား၏ ရောဂါ လက္ခဏာများ
AMLရောဂါ လက္ခဏာများတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည် -
အလွယ်တကူ အညိုအမည်းစွဲလွယ်ခြင်း နှင့် သွေးယိုခြင်း
အသေးအမွှားထိရှမှုတစ်ခုမှပင်လျှင် ရပ်ရန်ခက်သည့် သွေးယိုစီးခြင်း
အရိုးများ သို့မဟုတ် အဆစ်များ နာကျင်ခြင်း
နံရိုးအောက်တွင် နာခြင်း သို့မဟုတ် ပြည့်တင်းသလိုခံစားရခြင်း
ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် မိုင်းလွိုက် လူခီးမီးယားရောဂါရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း
လူခီးမီးယားကို ရောဂါအမည်တပ်ရာတွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ စစ်ဆေးမှုများ အမြဲလိုအပ်ပါသည်။ ခန္ဓာကိုယ်စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းယူခြင်းနှင့် သွေးစစ်ဆေးမှုအဖြေများကို စစ်ဆေးအပြီးတွင် ဆရာဝန်များအနေဖြင့် လူခီးမီးယားရောဂါကို သံသယစတင်ရှိနိုင်ပါသည်။ လူခီးမီးယားရောဂါရှိသော ကလေးများတွင် ၎င်းတို့၏သွေးအတွင်း ပုံမှန်အားဖြင့် သက်တမ်းနု သွေးဖြူဥ အရေအတွက်မြင့်နေတတ်သည်။
သမားတော်က ခန္ဓာကိုယ် စမ်းသပ်မှုလုပ်ဆောင်ပြီး လူနာ၏ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်း ကို အရင်ဆုံး ကြည့်ရှုပါမည်။ ခန္ဓာကိုယ် စမ်းသပ်မှုပြုလုပ်နေစဉ် ဆရာဝန်က အကြိတ်ဖုများ သို့မဟုတ် ပုံမမှန်သည့် အခြားတစ်ခုခုကဲ့သို့သော ရောဂါလက္ခဏာများအပါအဝင် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အထွေထွေသွင်ပြင်လက္ခဏာများကို စစ်ဆေးပါမည်။ မျက်လုံးများ၊ ပါးစပ်၊ အရေပြား နှင့် နားများကို သေသေချာချာကြည့်ရှုပါလိမ့်မည်။ အာရုံကြောစနစ်ဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုတစ်ခုကို လုပ်ကောင်းလုပ်နိုင်ပါသည်။ သရက်ရွက်ကြီးနေသော သို့မဟုတ် အသည်းကြီးနေသော လက္ခဏာများရှိမရှိသိရှိရန် ဆရာဝန်က လူနာ၏ဝမ်းဗိုက်ကို စမ်းကြည့်ပါလိမ့်မည်။
လူနာ၏ ကျန်းမာရေးမှတ်တမ်းကို ကြည့်ရှုရာတွင် ဆရာဝန်က မျိုးရိုးလိုက်သည့် ကင်ဆာရောဂါရှိနိုင်သည်ကြောင်း ညွှန်ပြသည့် မိသားစုအတွင်း ဆေးဖက်ဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုခု သို့မဟုတ် ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်လေ့ရှိသောပုံစံများ ရှိမရှိ သိရှိရန် ကြည့်ရှုပါလိမ့်မည်။ ကလေးဘဝတွင်ဖြစ်သည့် ၀ - ၁၈ နှစ်အကြားဖြစ်သော ကလေးဘဝ ကင်ဆာရောဂါများအနက် 8-10% ကသာ မျိုးရိုးလိုက်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကလေးဘဝတွင်ဖြစ်ပွားသည့် AML ၏ အန္တရာယ်ရှိသည့် အချက်များတွင် အောက်ပါတို့ပါဝင်ပါသည် -
လူခီးမီးယားရှိသော အကို/ညီ/မောင် သို့မဟုတ် အမ/ညီမ ရှိခြင်း ၊ အထူးသဖြင့် အမွှာများ။
ယခင်ကုသမှုတွင် ကီမိုဆေးသွင်းခြင်းကုထုံး သို့မဟုတ် ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံး ဖြင့် ကုသမှုရှိခြင်း။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီဆဲလ် ကြီးထွားမှု မမှန်ကန်သည့် ရောဂါ မိုင်အယ်လိုဒစ်ပလပ်စတစ် ဆင်ဒရုမ်း )myelodyplastic syndrome( ရှိခြင်း။
အောက်ပါတို့ကဲ့သို့သော မျိုးရိုးလိုက်သည့် ဖောက်ပြန်မှုများအချို့ ရှိခြင်း -
မွေးရာပါ သွေးနီဉဆဲလ်လောင်း မဖွံ့ဖြိုးသည့် ရောဂါ ဒိုင်းမွန်း ဘလက်ဖန် ဆင်ဒရုမ်း (Diamond-Blackfan syndrome)
မွေးရာပါ ကလေး ဉာဏ်ရည် မပြည့်သည့် ရောဂါ ဒေါင်းဆင်ဒရုမ်း (Down syndrome)
မျိုးရိုးလိုက်ကင်ဆာရောဂါ လီဖရောင်မန်နီ ဆင်ဒရုမ်း (Li-Fraumeni syndrome)
အတွဲမညီမှု ပြင်ဆင်သည့် မစ်မက်ချ် ရီပဲ ဆင်ဒရုမ်များ (Mismatch repair syndromes)
နဗ်ကြောမျှင်ထူ မြင်းပွားခြင်း အမျိုးအစား ၁ (Neurofibromatosis type 1)
မွေးရာပါတစ်ရှူးဖွံဖြိုးမှုနည်းသည့် ရောပါ နွန်အန်း ဆင်ဒရုမ်း (Noonan syndrome)
မျိုးရိုးလိုက် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အလုပ်မလုပ်နိုင်သည့် ရောဂါ ရှဗာ့ခ် မန် - ဒိုင်းမွန်း ဆင်ဒရုမ်း (Schwachman-Diamond syndrome)
ဆရာဝန်က သွေးဆဲလ်အားလုံး၏အရေအတွက် (complete blood count) ဟုခေါ်သည့် သွေးစစ်ဆေးမှုတစ်ခု ပြုလုပ်ရန်မှာကြားပါလိမ့်မည်။ အောက်ပါတို့ကိုစစ်ဆေးရန် သွေးနမူနာတစ်ခုကို ထုတ်ယူပါသည်-
သွေးဖြူဥဆဲလ်များ၏ အရေအတွက် နှင့် အမျိုးအစား
သွေးနီဥဆဲလ်များအတွင်းရှိအနီရောင်ခြယ်ပစ္စည်း ဟေမိုဂလိုပင် (hemoglobin) ပမာဏ
အပိုင်းသွေးနီဥဆဲလ်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော သွေးနမူနာ
လူခီးမီးယားတွင် သွေးအတွင်း သွေးဖြူဥဆဲလ်များ၏ အရေအတွက်မြင့်တက်မှု ရှိနေနိုင်ပါသည်။ ယင်းဆဲလ် အမြောက်အများမှာ ကျန်းမာသောကလေးများ၏ ရိုးတွင်းခြင်ဆီအတွင်း၌သာ တွေ့ရတတ်သည့် သက်နုဆဲလ် ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည့်ဆဲလ်လောင်း ဘလပ်စ်ဆဲလ်များ (blasts)ဖြစ်နိုင်သည်။
ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ နှင့် တစ်ရှူးများမှ သွေးတွင်းသို့ထုတ်လွှတ်သော အချို့ပစ္စည်းများ၏ပမာဏကို တိုင်းတာရန် သွေးနမူနာတစ်ခုကို စစ်ဆေးပါသည်။ ပစ္စည်းတစ်မျိုး၏ ပုံမှန်မဟုတ်သည့် (ပုံမှန်ထက် အမြင့် သို့မဟုတ် အနိမ့်) သည် ရောဂါ၏ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ ဖောက်ယူခြင်း နှင့် အသားစထုတ်ယူစစ်ဆေးခြင်း (bone marrow aspiration and biopsy) ကဲ့သို့သော ရိုးတွင်းခြင်ဆီစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများက ကင်ဆာရောဂါတစ်ခုအားအမည်တပ်မှုကို အတည်ပြုပေးပြီး ကင်ဆာရောဂါအမျိုးအစားကို ထောက်ပြပါလိမ့်မည်။ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေစဉ်တွင် ကလေးအများစုမှာ အိပ်ပျော်နေကြသည် (မိန်းမောအောင်ပြုထားသည်)။ လုပ်ငန်းစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေစဉ် နိုးနေပါက လူနာအား သင့်တော်သည့် နာကျင်မှုသက်သာသည့်ဆေးပေးထားပါသည်။ဆေးဝါး.
ရိုးတွင်းခြင်ဆီဖောက်ယူခြင်း (Bone marrow aspiration) -ဆရာဝန်များက သေးပြီး အခေါင်းပါသည့် အပ်ကိုတင်ပါးရိုးတွင်း ထိုးသွင်းခြင်းဖြင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီနမူနာတစ်ခုကို ရယူပါလိမ့်မည်။ ရောဂါဗေဒပညာရှင်တစ်ဦးသည် ကင်ဆာ၏လက္ခဏာများကို ရှာဖွေရန် မိုက်ခရိုစကုပ်အောက်တွင် နမူနာကို ကြည့်ရှုပါမည်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အသားစထုတ်ယူစစ်ဆေးခြင်း (Bone marrow biopsy) -ကင်ဆာရောဂါက ရိုးတွင်းခြင်ဆီအတွင်း မည်မျှပျံ့နှံ့နေသည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန်ကင်ဆာရောဂါကိုအရိုးတစ်ရှူး ခပ်သေးသေးတစ်စ ထုတ်ယူပါလိမ့်မည်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီကို မစုပ်ယူခင်ဖြစ်စေ၊ စုပ်ယူပြီးချိန်တွင်ဖြစ်စေ အသားစယူ၍ စစ်ဆေးခြင်းကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီ စုပ်ယူခြင်း/အသားစ နမူနာယူခြင်း ကိုမည်သို့ လုပ်ဆောင်ပါသလဲ။
လူနာများက အိပ်ယာပေါ်တွင် ဘေးတိုက်လဲလျောင်းရပါလိမ့်မည် သို့မဟုတ် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ခြေထောက်ကိုကွေးပြီး ခြေကျင်းဝတ်တွင်ချိတ်ကာ ထိုင်ရပါလိမ့်မည်။
ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သူနာပြု က စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုအတွက် မှန်ကန်သောနေရာကို ရရှိရန် လူနာ၏ ကျောအောက်ပိုင်းကို စမ်းရှာပါလိမ့်မည်။
ထို့နောက်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်ပေးသူက လက်အိတ်ဝတ်ဆင်ပြီး လူနာ၏ကျောကို ပိုးသတ်သည့်ဆပ်ပြာဖြင့် သန့်ရှင်းပေးပါလိမ့်မည်။ ပြီးလျှင်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသည့်ပေးသူက အရေပြားဧရိယာသေးသေးတစ်နေရာကိုသာ ဖော်ထားပြီး ပလပ်စတစ်ပုဝါများကို ကျောပေါ်တွင် နေရာချထားနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ လူနာအနေဖြင့် ခြင်ဆီစုပ်ယူစဉ် သို့မဟုတ် အသားစနမူနာယူချိန်တွင် နိုးကြားနေလိုပါက ရိုးတွင်းခြင်ဆီ စုပ်ယူမည့် သို့မဟုတ် အသားစနမူနာယူမည့် နေရာပေါ်တွင် လုပ်ထုံးလုပ်နည်း မလုပ်ဆောင်မီ တစ်နာရီခန့်ကြိုတင်၍ ထုံဆေးလိမ်းဆေးပေးပါလိမ့်မည်။ ထုံစေသည့်ဆေးရည်ကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ဆောင်မည့်နေရာတွင် ဆေးထိုးအပ်ဖြင့် ထိုးသွင်းပေးနိုင်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူက အပ်ကိုထုတ်ပြီး ဖောက်သည့်နေရာကို အရက်ပြန်ဖြင့် သန့်ရှင်းကာ ဆေးပလပ်စတာတစ်ခုဖြင့် ကပ်ပေးပါလိမ့်မည်။
လူခီးမီးယားကို ရောဂါအမည်တပ်ရာတွင် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ စစ်ဆေးမှုများ အမြဲလိုအပ်ပါသည်။
မော်လီကျူလာ နှင့် မျိူးရိုးဗီဇ စစ်ဆေးမှုများ (Molecular and genetic tests)
Immunophenotyping ကို ခုခံအားစနစ် (immune system)မှ ပုံမှန်ဆဲလ်များကို ကင်ဆာဆဲလ်များနှင့် နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့် လူခီးမီးယား သီးခြားအမျိုးအစားများအတွက် ရောဂါအမည်တပ်ရာတွင် အသုံးပြုပါသည်။i
Immunohistochemistry နှင့် ဖလိုး ဆိုက်တိုမက်ထရီ (flow cytometry) တို့သည် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများ ဖြစ်ကြသည်။
ပဋိပစ္စည်းများအခြေပြု၍ ဇီဝတစ်ရှူးများအတွင်း သီးခြားပဋိဇာတ် (ပရိုတင်း) ကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခြင်း ဆိုသည်မှာ တစ်ရှူးနမူနာထဲမှ သီးခြားပရိုတင်းကို ဖော်ထုတ်ရန် ပဋိပစ္စည်းများကိုအသုံးပြု၍ စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်သည်။ အညိုရောင် သို့မဟုတ် အနီရောင်ဖြစ်သွားသည့် ပရိုတင်းများနှင့် ပဋိပစ္စည်းများ ရောနှောပေါင်းစပ်သွားခြင်းကို အနုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တွင် မြင်တွေ့နိုင်သည်။
flow cytometry တွင် ဆဲလ်များကို အလင်းရောင်တုံ့ပြန်မှုကောင်းသည့် ဆိုးဆေးဖြင့်အရောင်ဆိုးပြီး အရည်တစ်ခုအတွင်းထားကာ လေဆာ သို့မဟုတ် အခြားအလင်းရောင်အမျိုးအစားရှေ့တွင် ဖြတ်သန်းစီးဆင်းစေပါသည်။ ယင်းစစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုက ဆဲလ်အရေအတွက်၊ အသက်ရှိနေသော ဆဲလ်ရာခိုင်နှုန်း၊ နှင့် ဆဲလ်များ၏ အရွယ်အစား၊ ပုံသဏ္ဍာန် နှင့် ဆဲလ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ကင်ဆာအမှတ်အသားများရှိမရှိ ကဲ့သို့သော အချို့ဝိသေသလက္ခဏာများကို တိုင်းတာပါသည်။
ခရိုမိုဆုန်းနှင့် ဆက်နွှယ်လျှက်ရှိသော မူမမှန်မှုများကို ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်းတွင် ခရိုမိုဆုန်းများအတွင်းရှိ အချို့သောအပြောင်းအလဲများအတွက် ရောဂါဗေဒပညာရှင်များ ရှာဖွေသည့် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများပါဝင်ပါသည်။
အဆိုပါစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုဆိုရပါမူ FISH (fluorescence in situ hybridization) ဖြစ်သည်။ ၎င်းစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုသည် ဆဲလ်များနှင့် တစ်ရှူးများအတွင်းရှိ မျိုးဗီဇများ သို့မဟုတ် ခရိုမိုဆုန်းများကို စဆေးပေးသည်။ အလင်းရောင်ထွက်စေသည့် ရောင်ခြယ်ပစ္စည်းပါဝင်သော DNA မော်လီကျူးကို ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် ဖန်ပြားပေါ်တွင် ဆဲလ် သို့မဟုတ် တစ်ရှူးများနှင့်ပေါင်းစပ်ပါသည်။ ယင်း DNA ပစ္စည်းအပိုင်းအစများသည် ဖန်ပြားပေါ်ရှိ တစ်ချို့သော မျိုးရိုးဗီဇများ သို့မဟုတ် ခရိုမိုဆုန်းများ၏ အချို့သောဧရိယာများပေါ်တွင် တွယ်ကပ်သောအခါ၌ ၎င်းတို့သည် အလင်းရောင်ထွက်လာသည်။
သီးခြား မျိုးရိုးဗီဇများ၊ ပရိုတင်းများ၊ နှင့် လူခီးမီးယားတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေသည့် အခြားအချက်များကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ရန်သွေးကင်ဆာနှင့်. ယင်း စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုက အရေးကြီးပါသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆဲလ်၏မျိုးရိုးဗီဇများတွင်း မှားယွင်းမှုများ (သန္ဓေပြောင်းခြင်းများ)က ဖြစ်စေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယင်းအမှားအယွင်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းက လူခီးမီးယား သီးခြားမျိုးကွဲများကို ရောဂါအမည်တပ်ရာတွင် ကူညီပါသည်။ ယင်းအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံပြီး ဆရာဝန်များအနေဖြင့် သီးခြားရောဂါတစ်ခုစီအတွက် သီးသန့်ပြုလုပ်ထားသည့် ရွေးချယ်ကုသမှုများကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကောင်းမွန်သောရလဒ်တစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်သည့် သန္ဓေပြောင်းခြင်းများပြသသည့် လူခီးမီးယားရှိသော ကလေးများကို အဆိပ်သင့်မှုနည်းပါးသည့်ကုသမှုများ ပေးနိုင်ပါသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် ဆရာဝန်များအနေဖြင့် မကောင်းသည့်ရလဒ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော သန္ဓေပြောင်းခြင်းများရှိသည့်လူခီးမီးယားရောဂါတစ်ခုအတွက်ပိုပြီး ပြင်းထန်သည့်ကုသမှုများ ပေးနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ သီးခြားသန္ဓေပြောင်းခြင်းသန္ဓေပြောင်းခြင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။
ခါးရိုးဖောက်ခြင်း (lumbar puncture) ကို ဦးနှောက်အာရုံကြောအတွင်းလှည့်လည်စီးဆင်းသည့် အရည်နမူနာအား ကျောရိုးမကြီးမှ ဖောက်ယူစုဆောင်းရန် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ယင်းကကင်ဆာရောဂါကိုဗဟိုအာရုံကြောစနစ် (central nervous system)တွင်း ပျံ့နှံ့မှုရှိမရှိ သိစေပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဥ်ကို LP သို့မဟုတ် ကျောရိုးဖောက်ထုတ်သည့် လုပ်ငန်းစဥ်ဟု ခေါ်ပါသည်။
အပ်တစ်ချောင်းကို ကျောရိုးမကြီးတွင်းရှိ အရိုးနှစ်ခုအကြားထားကာကျောရိုးအာရုံကြောမကြီး (spinal cord)ပတ်လည်ရှိ အရည်အတွင်းသို့ ထည့်ပါသည်။ အရည် နမူနာတစ်ခုကို ထုတ်ယူပါသည်။ လူခီးမီးယားဆဲလ်များက ဦးနှောက်နှင့်ကျောရိုအာရုံကြောမကြီးအတွင်းသို့ ပျံ့နှံ့မှုရှိပြီးမပြီး သိရှိရန် ယင်းအား အနုကြည့်မှန်ပြောင်းတစ်ခုအောက်တွင် စစ်ဆေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ခန္ဓာကိုယ်က ကျောရိုးမတွင်းလည်ပတ်သည့်အရည် (spinal fluid) ကို တသမတ်တည်းထုတ်လုပ်နေသည့်အတွက် ဖောက်ပြီးယူလိုက်သည့် အရည်ပမာဏအနည်းအကျဉ်းကို ကိုယ်ခန္ဓာမှ အလျင်အမြန် ပြန်ဖြည့်ပေးပါသည်။
X-rayတစ်ခုဆိုသည်မှာ ကိုယ်ခန္ဓာကို ဖောက်ထွင်းဖြတ်သန်းကာ ဖလင်ပြားတစ်ခုအပေါ် သွားနိုင်ကာ ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းပိုင်းရှိဧရိယာများ၏ပုံရိပ်တစ်ခုကို ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်တစ်ခု သို့မဟုတ် အထူးဖလင်ပြားတစ်ခုပေါ်တွင် ပေါ်အောင်လုပ်နိုင်သော စွမ်းအင်တန်းအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရင်ဘတ်ဓာတ်မှန် (chest X-ray) ကို လူခီးမီးယားဆဲလ်များက ရင်ဘတ်၏အလယ်တွင် အစိုင်အခဲတစ်ခုအဖြစ် ဖြစ်စေခြင်း ရှိမရှို ကြည့်ရှုရန်ပြုလုပ်ပါသည်။
Acute Myeloid Leukemia အတွက် ကုသမှု
ကုသမှုက AML အမျိုးအစားပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ AML ပုံစံ သုံးမျိုး— ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် ပရိုမိုင်လိုဆိုက်တစ် လူခီးမီးယား (acute promyelocytic leukemia( (APL)၊ ဒေါင်းဆင်ဒရုန်းရှိသည့် ကလေးများတွင်ဖြစ်ပွားသည့် AML၊ နှင့် FLT3-mutated AML —ကို အခြား AMLအမျိုးအစားများနှင့် မတူကွဲပြားစွာ ကုသပါသည်။ ကီမိုဆေးသွင်းခြင်း ကုထုံးAML အတွက် ပင်မကုသမှုဖြစ်သည်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးခြင်း ကလည်း အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ဆရာဝန်က ကုသမှုအတွက်အကြောင်းကြားရန် အချက်အလက်စုဆောင်းပါသည်။
ရိုးတွင်းခြင်ဆီ ဖောက်ယူခြင်း နှင့်/သို့မဟုတ် အသားစနမူနာယူခြင်း (Bone marrow aspirate and/or biopsy)
လူနာအနေဖြင့်tunneled central line တစ်ခု အသွင်းခံရပါလိမ့်မည် သို့မဟုတ်အခြားပင်မသွေးပြန်ကြောတွင်း ထည့်သည့် ကိရိယာ (central venous access device) ကီမိုဆေးသွင်းကုထုံး (chemotherapy) ၊ အရည်များ ထည့်သွင်းရန် နှင့် သွေးနမူနာများ ဖောက်ယူရန်အတွက်။
ယင်းအဆင့်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာသွေးတွင်း နှင့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီတွင်းရှိလူခီးမီးယားဆဲလ်များကိုဖျက်ဆီးပြီး ရောဂါကို ယာယီပျောက်ကင်းသည့်အဆင့်သို့ ဆောင်ယူရန်ဖြစ်သည်။
AML ရှိသောလူနာများက ရောဂါပိုးဝင်ရန် လွယ်ကူသည့်အတွင် ပဋိဇီဝဆေးများဖြင့် ထောက်ပိုးသည့် ကုထုံးကိုလည်း ပေးပါသည်။
ယခုအချိန်အတွင်း ဦးနှောက် နှင့် အာရုံကြောမကြီးအတွင်း ကျန်ရှိနေသော လူခီးမီးယားဆဲလ်များကို သတ်ရန်ဗဟိုနဗ်ကြောအဖွဲ့အစည်း (Central nervous system) (CNS) ကိုကင်းရှင်းစေသည့် ကုထုံး(CNS ကာကွယ်ဆေးဟုလည်းခေါ်သည်) ကိုလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။
မူရင်းသွေးဆဲလ် အစားထိုးခြင်း (hematopoietic cell transplant)လိုမလိုကို အစပျိုးသည့် ကီမိုဆေးသွင်းကုထုံးက မည်မျှကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သည်ကို ဆရာဝန်များက ကြည့်ရှုဖို့များပါလိမ့်မည်။ အမှန်တကယ်တွင် လူနာအနေဖြင့် အစားထိုးကုသမှုတစ်ခုလုပ်ရရန် လိုအပ်သည့်အခြေအနေ၌ အလားအလာရှိသော လှူဒါန်းသူများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန် လူနာများနှင့်မိသားစုများအနေဖြင့် HLA အမျိုးအစားခွဲခြင်း လုပ်ဆောင်ရနိုင်ပါသည်။
အနည်းဆုံးလက်ကျန်ရောဂါ (MRD)ကို တိုင်းတာရန်အတွက် ကလေးကုသရေးစင်တာ အတော်များများက တုံ့ပြန်မှုမြင့်သည့် စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများကို အသုံးပြုကြသည်။ အပေါင်းလက္ခဏာပြသည့် MRD က အန္တရာယ်မြင့်မားမှု နှင့် ပိုမိုပြင်းထန်သောကုထုံးလိုအပ်မှုရှိသည်ဟု ညွှန်ပြပါသည်။
ပေါင်းစုခြင်း (Consolidation(/ ပြင်းအားများစေခြင်း (Intensification(/ အစပျိုးမှုအပြီး (Post-induction)
ယင်း ပေါင်းစုသည့်အဆင့် (consolidation phase) က လူနာ၏ ယာယီပျောက်ကင်းချိန်အပြီးတွင် စတင်ပါသည်။ ၎င်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျန်ရှိနေသေးသော မည်သည့် လူခီးမီးယားဆဲလ်မဆိုကို သုတ်သင်ဖျက်ဆီးရန်ဖြစ်သည်။
ယင်းတွင် ကီမိုဆေးသွင်းကုထုံးစက်ဝန်း ၂-၄ ပတ်လည် ပါဝင်ပါသည်။
အချို့သော လူနာများအနေဖြင့် ယင်းအဆင့်တွင်မူရင်းသွေးဆဲလ် အစားထိုးမှု (hematopoietic cell transplant) ရရှိနိုင်ပါသည်။ အကယ်၍ လူနာတစ်ဦးသည် အစားထိုးကုသမှုရရှိပါက သူ သို့မဟုတ် သူမအနေဖြင့် ရက်သတ္တပတ်များစွာ ဆေးရုံတက်ရမည်ဖြစ်သည်။ လူနာအနေဖြင့် ကျောင်းသို့ပြန်မသွားနိုင်မီ တစ်နှစ် ဖြစ်ဖို့များပါသည်။
လူနာအနေဖြင့် နောက်ဆက်တွဲပြသမှုအတွက် ၄ လ တစ်ကြိမ် ပြန်လာပြရပါမည်။
နှစ် ၂ (ဒုတိယနှစ်)
ပြန်လာပြရမည့်အချိန်သည် ၆ လတစ်ခါပြောင်းလဲတတ်ပါသည်။
အစပျိုးခြင်းအဆင့်၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သွေးအတွင်း နှင့် ရိုးတွင်းခြင်ဆီအတွင်းရှိ လူခီးမီးယားဆဲလ်များကို သုတ်သင်၍ ရောဂါကို ယာယီပျောက်ကင်းသည့်အဆင့်သို့ ယူဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။ AML လူနာများမှာ ရောဂါပိုးဝင်ရန် လွယ်ကူသည့်အတွက် ပဋိဇီဝဆေးများပါသည့်ထောက်ကူပေးသည့် ကုထုံး ကိုလည်း ပေးပါသည်။ ယခုအချိန်အတွင်း ဦးနှောက် နှင့် အာရုံကြောမကြီးအတွင်း ကျန်ရှိနေသော လူခီးမီးယားဆဲလ်များကို သတ်ရန်ဗဟိုနဗ်ကြောအဖွဲ့အစည်း (Central nervous system) (CNS) ကိုကင်းရှင်းစေသည့် ကုထုံး(CNS ကာကွယ်ဆေးဟုလည်းခေါ်သည်) ကိုလည်း ပေးနိုင်ပါသည်။ ဆေးဝါးများကို ဦးနှောက်နှင့် ကျောရိုးဆစ်အာရုံကြောမကြီးကို ဖုံးအုပ်ထားသည့် တစ်ရှူးအလွှာများအကြားရှိ အရည်ဖြင့်ပြည့်နေသော နေရာအတွင်းသို့ ထိုးသွင်းပေးပြီး ယင်းကို (အင်ထရာသီကယ်လ် (intrathecal))ပေးသည်ဟု ခေါ်ပါသည်။
အစပျိုးသည့်ကုထုံးတွင် ဆိုက်တာရာဘင်း (cytarabine) နှင့်အခြား အန်သရာ ဆိုက်ကလင်း ဆေးဝါးတစ်မျိုး (anthracycline drug( ၊ အများဆုံးပေးလေ့ရှိသည်မှာဒေါ်နိုရူဘီဆင် (daunorubicin)ကို အီတိုပိုဆိုက် (etoposide) နှင့်/သို့မဟုတ် သီအိုဂွါနင်း (thioguanine).ဖြင့်တွဲပေးသည့် ဆေးဝါးစုပေါင်းအတွဲတစ်ခု အစဉ်အလာအားဖြင့် ပါဝင်ပါသည်။
၂။ ပေါင်းစုခြင်း (Consolidation)/ ပြင်းအားများစေခြင်း (Intensification)/ အစပျိုးမှုအပြီး (Post-induction)
ယင်းအဆင့်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပြန်လည်ကြီးထွားကာကင်ဆာရောဂါ ပြန်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း (relapse)ဖြစ်စေနိုင်သော ကျန်ရှိနေသည့် မည်သည့်လူခီးမီးယားဆဲလ်မဆိုကို သုတ်သင်ရန်ဖြစ်သည်။ ကင်ဆာစင်တာများက ပုံမှန်ဆဲလ် ၁၀၀၀ အကြားတွင်ရှိနေနိုင်သည့် AML ကင်ဆာဆဲလ်တစ်ခုကိုပင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်စွမ်းရှိသော စစ်ဆေးစမ်းသပ်မှုများကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ အစပျိုးသည့်အဆင့်အပြီးတွင် ပုံမှန်ဆဲလ် ၁၀၀၀ အကြားတွင် ကင်ဆာဆဲလ် တစ်ခုထက်ပိုရှိသောကလေးများအနေဖြင့် ရောဂါပြန်ဖြစ်ပွားရန် ကြီးမားသောအန္တရာယ်ရှိပါသည်။
ယင်း ပေါင်းစည်းသည့်အဆင့်ကို လူနာ၏ ယာယီပျောက်ကင်းချိန်အပြီးတွင် စတင်ပါသည်။ ယင်းတွင် ကီမိုဆေးသွင်းကုထုံး စက်ဝန်း ၂-၄ ပတ်လည်အောင် ပေးခြင်းပါဝင်ပြီး ယင်းက ၄ လ မှ ၆ လအထိ ကြာပါသည်။ ယင်းသို့သော ကုထုံးတွင် အစပျိုးသည့်အဆင့်၌အသုံးပြုခဲ့သော ဆေးဝါးအချို့ပါဝင်သလိုအပြန်အလှန်ခုခံမှုမပေးသည့်ဆေးဝါးများ (non-cross–resistant drugs) နှင့် ပမာဏများများ အစဉ်ပေးလေ့ရှိသောဆိုက်တာရာဘင်း (cytarabine)တို့ကို မိတ်ဆက်စတင်ပါသည်။.
ဟီမာတိုပွိုင်အက်တစ် ဆဲလ် (သွေးဖြစ်ဆဲလ်) အစားထိုးကုသမှု
မူရင်းသွေးဆဲလ် အစားထိုးခြင်း (hematopoietic cell transplant) (ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးခြင်း (bone marrow transplant( သို့မဟုတ် ပင်မဆဲလ်အစားထိုးခြင်း (stem celltransplant) ဟုလည်းသိကြသည်) ကို ရောဂါပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ရန် အန္တရာယ်မြင့်မားသည့်ကလေးများ သို့မဟုတ် ကုသမှုကို ယဉ်ပါးသွားသော AML ရှိနေသည့်ကလေးများတွင် ပေးရန် တိုက်တွန်းအကြံပြုထားပါသည်။ ရိုးတွင်းခြင်ဆီတစ်ခု် အစားထိုးခြင်း လိုမလိုကို ဆုံးဖြတ်ရန် အစပျိုးသည့် ကီမိုဆေးသွင်းကုထုံးက မည်မျှကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်သည်ကို ဆရာဝန်များက ကြည့်ရှုဖို့များပါလိမ့်မည်။
AML လူနာများအနေဖြင့် အလိုဂျနီးအစ် အစားထိုးခြင်း (allogeneic transplant)ရရှိကောင်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
allogeneic ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုးမှုတစ်ခုတွင် ကလေးများအနေဖြင့် ကျန်းမာသော ရိုးတွင်းခြင်ဆီလှူဒါန်းသူထံမှ သွေးဆဲလ်ထုတ်လုပ်သည့် ဆဲလ်များကို လက်ခံရရှိပါသည်။ အစားထိုးမှုတစ်ခုအတွက် အကျုံးဝင်ရရှိရန် လူနာများထံတွင် သင့်တော်သောလှူဒါန်းသူတစ်ဦး ရှိရပါမည်။ လှူဒါန်းသည့်ဆဲလ်များကို လက်ခံမရရှိမီ လူနာ၏ ရိုးတွင်းခြင်ဆီတွင်းရှိ လက်ရှိသွေးဆဲလ်များကို ကီမိုဆေးသွင်းကုထုံးပေးခြင်းဖြင့် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ဓာတ်ရောင်ခြည်ပေးခြင်းဖြင့် ဖျက်ဆီးပါသည်။ လူနာသည် ကျန်းမာသော လှူဒါန်းသည့်သွေးဆဲလ်နှင့် ခြင်ဆီဆဲလ်များကို သွေးကြောတွင်းသို့ ပိုက်ဖြင့်ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် လက်ခံရရှိပါသည်။ အကယ်၍ အောင်မြင်ပါက ယင်းလှူဒါန်းသည့် ဆဲလ်သစ်များက လူနာ၏သွေးနှင့်ခြင်ဆီဆဲလ်များအတွင်း ရှင်သန်ကြီးထွားကာ အစားထိုးပေးပါလိမ့်မည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် လူနာ၏ရိုးတွင်းချဉ်ဆီ (bone marrow) က ကျန်းမာသည့်ဆဲလ်များ စတင်ထုတ်လုပ်သင့်ပါသည်။
ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် မိုင်းလွိုက် လူခီးမီးယားအတွက် ရောဂါကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
ကလေးဘဝ AML အတွက် ငါးနှစ် အသက်ရှင်နိုင်နှုန်း 70 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပါသည်။
AML ရောဂါရှိသောကလေးများ၏ 90 ရာခိုင်နှုန်းသည် ကနဦးကုသမှုပေးပြီးနောက်တွင် ၎င်းတို့၏ သွေးအတွင်း ကင်ဆာဆဲများ မရှိတော့ပါ။ AML ရောဂါရှိသောကလေးများ၏ 30 ရာခိုင်နှုန်းခန့်တွင် ရောဂါ ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ခြင်း (relapse) သို့မဟုတ်ရောဂါဆေးယဉ်သည့် (တုံ့ပြန်မှုမရှိသော) ရောဂါရှိသည်။
ပြင်းထန်ပြီး လျင်မြန်စွာတိုးပွားသည့် မိုင်းလွိုက် လူခီးမီးယား၏ နောက်ပိုင်းသက်ရောက်မှုများ
နောက်ကျသက်ရောက်မှု (late effect) တစ်ခုဆိုသည်မှာ ရောဂါတစ်ခုအဖြစ် အမည်တပ်ပြီးနောက် သို့မဟုတ် ကုသမှုအဆုံးသတ်ပြီးနောက်ပိုင်း လပေါင်းများစွာ သို့မဟုတ် နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ ပေါ်ပေါက်သည့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းသက်ရောက်မှုများ (Late effects) က ကင်ဆာရောဂါကြောင့် ဖြစ်စေ ကင်ဆာရောဂါကုသမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ယင်းတို့တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှင့် လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ နှင့် ဒုတိယကင်ဆာရောဂါများ ဝင်ရောက်ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
နောက်ပိုင်း သက်ရောက်မှုများတွင် အောက်ပါတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည် -
အရေပြားကင်ဆာ၊ ဦးနှောက်ကင်ဆာ၊ အရိုးကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ တစ်ရှူးပျော့များတွင်ဖြစ်ပွားသော ကင်ဆာ၊ နှင့် သိုင်းရွိုက်ကင်ဆာ တို့ကဲ့သို့သော ဒုတိယကင်ဆာများ
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲနိုင်မှုမရှိခြင်း၊ ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်ခြင်း၊ စီမံကိန်းဆွဲခြင်း နှင့် စနစ်တကျဖွဲ့စည်းလုပ်ဆောင်ခြင်း တို့တွင် အခက်အခဲများရှိခြင်း
လက်ရှိ Acute Myeloid Leukemia သုတေသန၏ အာရုံစိုက်မှု
လက်ရှိ သုတေသနက ကနဦးကုသမှုကို တုံ့ပြန်မှုမရှိသည့်ကင်ဆာရှိသော ကလေးများအတွက် ပိုမိုထိရောက်သည့် ကုသမှုများ တီထွင်ဖော်ထုတ်ရန်၊ ကင်ဆာဆဲလ်များကိုသာ ဦးတည်တိုက်ခိုက်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ကျန်းမာသောဆဲလ်များကို အန္တရာယ်မရောက်စေသည့်ကုသမှုများကို တီထွင်ဖော်ထုတ်ရန်၊ နှင့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနည်းပါသည့် ထိရောက်မှုသော ကုထုံးများဒီဇိုင်းထုတ်ရန် အာရုံစူးစိုက်ပါသည်။
AML အကြောင်း သတင်းများ